Soo-saareyaasha Qurxinta Guryaha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda Qurxinta Guriga ee Shiinaha
Qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'DIY Handmade tolment Flex Kit Kit' oo loogu talagalay bilowga 511101-511113
Xaraashka Shiinaha ee iibka kulul (jiir, dibi, shabeel, bakayle, masduulaagii, maskii, faras, ido, daanyeer, digaag, eey, doofaar). Xadhig Xirmada Qalabka Diy-ga ah ee Lagu Dhoobay Qalabka Hoop-ka loo isticmaalo gacmo-gacmeed laga sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si ay u muujiso dareenkaaga Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'DIY Handmade' Qalabka Farsamada Gacanta ee Bilawga 511121
Xaraashka iibinta kulul ee Qaabka Ubaxa Yurub Qaabka Mawjadaha Qalabka Diy Boodhadhka leh Qalabka Hoop caaga ah isticmaal gacmeed - laga sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'DIY Handmade' Xirmooyinka Qalabka Farsamada Gacanta ee Bilowga 511122
Qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'DIY Handmade' Xirmooyinka Qalabka Farsamada ee Bilowga 511123
Qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'DIY Handmade' Xirmooyinka Qalabka Farsamaynta Qalabka ee Bilowga 511125
Qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'DIY Handmade' Qalabka Farsamada Gacanta ee Bilawga 511126
Qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'DIY Handmade' Xirmooyinka Xirmooyinka Farsamooyinka loogu talagalay Bilowga 511127
Qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'DIY Handmade' Xirmooyinka Qalabka Farsamada Gacanta ee Bilowga 511128
Dabaal-iibinta kulul (Ha ilaawin ujeeddadaadii hore) Xadhig Qaacid Diy Embroidery Kit Iyada oo Balaastik Hoop adeegsanaysa gacmo-sameysmo daabac leh oo saddex-cabbir leh, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'DIY Handmade' Xirmooyinka Qalabka Farsamada ee Bilowga 511129
Dabaal-iibinta Kulul (Dhalashada Wanaagsan) Mawjadda Xidhmada Qalabka Diy-ga ah ee Qalabka leh Caag Hoop isticmaal gacmeed - lagu sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'DIY Handmade' Xirmooyinka Qalabka Farsamada ee loogu talagalay Bilowga 511130
Dabaal-iibinta kulul (Saddexda nololeed ee hore loo sii qoondeeyay) Xadhig Diin Ah Waxyaabaha Lagu Duubo Qalabka Caaga ah Adeegsiga gacmeed - laga sameeyay daabac saddex-cabbir leh, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'DIY Handmade' Qalabka Farsamada Gacanta ee Bilawga 511131
Dabaal-iibinta kulul (Gacanta ku hay gjanice) Qalabka Xargaha Diy Boodhadhka leh Qalabka Hoop ee caaga ah isticmaal gacmeed - laga sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'DIY Handmade tolment Farsamada Dharka' Qalabka bilowga ah ee 511132
Dabaal-iibinta Kulul (jacayl ku arag aragtida koowaad) Qalabka Mawjadda Diy-ga ah ee Lagu Duubo Qalabka caagga ah ee loo yaqaan 'Hoop' isticmaal gacmeed - lagu sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.